UC Berkeley: I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Izikolo zokwamkelwa
Berkeley GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseCalifornia eBerkeley yenye yeyona ephakamileyo ephakamileyo kunye neyunivesithi yoluntu ekhethiweyo kweli lizwe, kwaye ukwamkelwa kukukhetha kakhulu. Abancinci kunabanye abafake izicelo ziza kuvunywa.
Berkeley GPA, SAT kunye ne-ACT Graph
I-UC Berkeley GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Okwabafundi abafunyenweyo, Abachasiweyo kunye nabafundi abalindileyo. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Njengoko i-scattergram ibonakala, abafundi abavunyelwayo eBerkeley banomdla wokuba ne-GPA eziphezulu kunye neemvavanyo zokuvavanya. Ubuluhlaza nokuluhlaza kubamele abafundi bamkelekile, ngoko unokubona ukuba uninzi lwabafundi abaye eBerkeley bane-GPA ngaphezu kwe-3.5, umlinganiselo we-ACT umgangatho ongaphezulu kwe-22, kunye nomlinganiselo we-SAT ohlangeneyo (RW + M) ngaphezulu kwe-1100. Amathuba okungenwa akhangele phambili kubafundi abane-GPA ezi-3.6 okanye ezingcono, ama-ACT amanqaku angama-26 okanye angcono, kunye nomlinganiselo we-SAT malunga ne-1200 okanye ngaphezulu. Kwakhona phawula ukuba amanqaku aphakamileyo kunye neGPA ephezulu ayikho isiqinisekiso sokungeniswa - abanye abafundi abanamanani amanqaku angenawo. Khangela igrafu yedatha yokulahlwa eBerkeley kwaye uza kubona ubuninzi obomvu bufihliweyo emva kohlaza okwesibhakabhaka nokuhlaza kwigrafu ngasentla.
Ukutshintsha kwakhona kuyinyaniso - abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namabakala angaphantsi kwesiqhelo. Njengazo zonke izikolo zaseYunivesithi yaseBalifornia , iBerkeley ine- admissions ephelele , ngoko ke amagosa angenayo avakalayo ahlola abafundi ngokusekelwe kwidatha yenombolo. ImiSebenzi yoBuchule boBuchule boBuchule , ukubandakanyeka kwexesha elifutshane, kunye nomdla wakho obalaseleyo kunokuba bonke badlale indima kwinkqubo yokungena. Amava omsebenzi, inkonzo yasekuhlaleni, kunye nemvelaphi yakho yodwa ingaba yimiba. Njengoko igrafu ibonisa, kunjalo, amandla akho kule mimandla engeyiyo yezemfundo iya kuphucula amathuba akho wokungeniswa, kodwa abayi kuhlawulela amabakala okanye amanqaku okuvavanya asemgangathweni angaphantsi kwesi siqhelo.
Eyona nto ibaluleke kunayo yonke yokungena kwi-UC Berkeley kukusebenza kwakho kwezemfundo, kodwa uBerkeley ukhangele okungaphezulu kwamabakala akho. Iyunivesithi ifuna ukubona amabakala aqhubela phezulu (okanye ubuncinane angabikho phantsi) kunye nokuphumelela kweempumelelo zeeklasi zokulungiselela iikholeji ezifana ne-AB, IB, ne-Honors. Iyunivesithi ifuna ukuvuma abafundi ababonisa uthando lokufunda kunye nabaye bazigxotha esikolweni esiphakeme.
Ukuba Uthanda iBerkeley, Unokuthi Unomdla Kwizikolo:
Abo banomdla kwiikholeji enkulu okanye kwiyunivesithi eWest Coast kufuneka baqwalasele izikolo ezifana neYunivesithi yaseWashington , i- UCLA , i- CSU-Long Beach , ne- CSU-Northridge .
Abafaki-zicelo abaphezulu abafuna izikolo ezikhethiweyo kunye nabaphakamileyo kakhulu kwilizwe lonke banokubanomdla kwiYunivesithi yasePennsylvania , kwiYunivesithi yaseYohn Hopkins, kwiYunivesithi yaseDuke nase- Princeton University .
UC Berkeley Admissions Data kubafundi abalahliweyo
IYunivesithi yaseCalifornia Berkeley GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQhathaniswa nabaFundiweyo abaFundiweyo. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Kwigrafu kwiphepha langaphambilini, yonke eluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza kubafundi abamkelekileyo efihla into yokuba abafundi abaninzi abanamabanga aphezulu kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni athathwe kwi-UC Berkeley. Ngenqanaba lokumkela elingaphantsi kwe-20%, iyunivesithi ifuna abafundi abakhanyayo kwimimandla emibili yezemfundo kunye nemfundo engekho emfundo, amanqaku amahle kwaye amanqaku e-SAT awasoloko anele ukufumana ileta yokuwamkela.
Xa ufaka isicelo eBerkeley, uya kuphepheka xa ucinga ukuba isikolo esifikiweyo nokuba ngaba amabanga akho kunye ne-SAT / ACT izikolo zijoliswe ekumiseni.
Ukuze ufunde kabanzi ngeyunivesithi, khangela i- UC Berkeley Profile .
I-Murray State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ikholeji yeCandelo leKholeji ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT
I-Grinnell College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
NJIT GPA, SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseVevvilleville GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Clemson Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseDenver GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Kenyon College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseRichmond GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseNorth Florida GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iimpawu eziMnandi Ngeengelosi
Uludwe lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwi-Colorado Students, K-12
Indlela yokufumana iinqununu zeNkululeko kwiStatisti
Ngaphambi kokuba Ufunde iBhayibhile
Indlela yokudibanisa isenzi esithi "Ukunikela" ngesiTaliyane
Iintlobo zeMbali zoLuntu lwe-Gun e-US
AmaBhanki okuBulala kunye nokuGcino amaRekhodi kwi-Intan
I-Mixtec - Inkcubeko yamandulo yaseMexico yaseMexico
Umlinganiselo: Ubomi bokuqala buka-Abraham Lincoln
Cómo remover las condiciones de tarjeta de residencia por matrimonio
Inkcazelo Yezenzo Zokudala - Umsebenzi oqala ngeP
'I-Bear yawela phezu kweNtaba' iChords
I-10 Oldies Iingoma eziphezulu ngeemoto
Iimfazwe zabesifazana kwiMfazwe Yehlabathi I kunye neMfazwe II yehlabathi
Iincwadi ezipheleleyo zeencwadi ezikhethiweyo kwiClub ye-Book ye-Oprah
Ngaba i-Dinosaurs Cannibals?
Indlela yokukhetha Uhlobo lwe-Fuel olufanelekileyo lweKota yakho
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya / iMinyaka esixhenxe
Iifolthi zeBhola ze-NFL: Iimpawu zokuzonwabisa ezinamaqela e-NFL
Iindawo eziphambili ze-Ski Coast ze-East Coast ze-Uroomed Runs